watchOS 2.0 Mitondra Lock Locking ho an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Lesoka lehibe io tamin'ny kinova voalohany an'ny rafitra fiasan'ny Apple Watch. Zava-dehibe amin'ny lanjany ary manan-danja amin'ny hadalany. Adinon'i Apple ny nampiditra hidy fampidirana ho an'ny vokatra sahanin'ity taona ity, iray amin'ireo fiasa izay tonga tao amin'ny iOS 7 roa taona lasa izay ary iray amin'ireo fandrosoana lehibe indrindra teo amin'ny fiarovana tato anatin'ny taona vitsivitsy, hatramin'ny nihena be ny iPhone halatra. Saingy toa nihetsika tsy ho ela i Apple, satria na dia tsy nanonona izany tamin'ny hetsika natao aza izy androany, ny Apple Watch dia nahazo hidy fanidiana ho an'ny kinova vaovao an'ny rafitr'izy ireo, watchOS 2.0.
Toy ny amin'ny iPhone na iPad, ny Apple Watch dia hitaky ny fampidirana ny kaonty iCloud-nao. Amin'izany fomba izany, raha misy mandray azy io ary te hamafa azy, dia tsy ho vitany izany raha tsy misy ny angon-drakitra fidirana iCloud anao, ary ho voaro koa ny datao. Zava-dehibe izany raha raisintsika fa miaraka amin'i Wallet ny Apple Watch dia hitahiry ny angona momba ny carte de crédit hampiasainao amin'ny Apple Pay, noho izany dia tsy tianao ho eo am-pelatanan'ny olona tsy azo atokisana izany angona izany.
Ny kinova vaovao an'ny WatchOS dia azo alaina ao amin'ny lohamilin'i Apple, na dia ho an'ny mpamorona ihany. Rehefa mahafantatra lafin-javatra vaovao izahay dia hilaza aminao momba azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » watchOS 2.0 Mitondra Lock Locking ho an'ny Apple Watch
Jereo voalohany amin'ny iOS 9 ho an'ny iPhone sy iPad
Rehefa mivoaka ny iOS 9: daty famoahana ny iOS vaovao